MISA submissions on the 4th draft of the Postal and Telecommunications Bill
MISA Zimbabwe this afternoon handed in submissions on the 4th draft of the Postal and Telecommunications Bill.
ZiFM interview with George Charamba on 9 April 2018: MISA responds
MISA Zimbabwe’s response to the ZiFM interview with The Permanent Secretary in the Ministry of Information, Media and Broadcasting Services, George Charamba on 9 April, 2018.
MISA Zimbabwe’s letter to the Southern African Development Community (SADC) Executive Secretary Dr Stergomena, updating the regional body and the African Union on Zimbabwe media reforms as set out in the 2013 AU elections observer mission recommendations.
MISA Zimbabwe joins the world in commemorating World Radio Day with a reminder to the government of Zimbabwe on the need for genuine transformation of the entire broadcasting sector to allow for diversity in radio broadcasting in the country.
Scrapping of BSA and AIPPA laws long overdue
MISA Zimbabwe welcomes remarks by the Acting Minister of Information, Media and Broadcasting Services that his ministry is working to amend laws that restrict freedom of expression and access to information.
MISA Zimbabwe is greatly concerned that the Broadcasting Authority of Zimbabwe is seeking to licence online video content providers who don’t require broadcasting frequencies.
Police and media agree on actions to secure safe media environment
Zimbabwe police and representatives of media organisations have agreed on a raft of actions to secure a safe and conducive working environment for journalists.
MISA Zimbabwe urges President Emmerson Mnangagwa to crack the whip for speedy implementation of media reforms that have been outstanding since the coming into being of Zimbabwe’s 2013 Constitution.